विवाह गर्न नमानेको भन्दै प्रेमीकाले आफ्नै प्रेमीलाई यस्तो गरे पछी … – Online Nepal
विवाह गर्न नमानेको भन्दै प्रेमीकाले आफ्नै प्रेमीलाई यस्तो गरे पछी …
April 13, 2020 336
काठमाडौं । अहिले माया प्रेमका बारेमा अनेक किसिमका समाचारहरु हेर्ने सुन्ने गरिएको छ । यस्तै एउटा अनौठो घ’ट’ना काठमाडौंका कपनमा घ’टे’को छ । प्रेमीले धो’का दिएपछि प्रेमीकाले आफ्नो प्रेमीको लिं’ग नै का’टि’दि’एकी छन् । सोमबार राति आफ्नो कोठामा बोलाएर युवतीले उक्त प्रेमी युवकको लिं’ग का’टे’र फालिदिएकी छिन् ।
यस घ’टा’नाको पुरा जानकारी महा’न’गरीय प्र’ह’री वृ’त बौद्धका डिए’सपी रमेश सिंहले दिनुभएको छ । अहिले उक्त युवती र उसका प्रेमीको नाम भने खुलाएको छैन । लि”ङ्ग का’टिएका युवकको अवस्था एकदमै ना’जुक रहेको प्रहरीले बताएको छ । युवक हायात होटलमा काम गर्दथे । युवकको ओम अस्प’तालमा उ’पचा’र भइरहेको छ । उनीहरु बिगत १ बर्ष देखि प्रेम’स’म्बन्धमा रहेका थिए ।
प्रहरीका अनुसार युवतीले आफ्नो प्रेमीसंग विवाह गर्ने प्र’स्ताव राखेकी थिइन् तर युवकले घरा’यसी कार’ण देखाएर अहिले नै विवाहा नगर्ने नियर्ण गरेका थिए । त्यसपछि युवकलाई अन्ति’म चोटी भेटम भनेर आफ्नो कोठामा बोलाएर उसको लि”ङ्ग का’टि’दि’एकी थिइन् । त्यसपछि युवतीले आफ्नो हात का’टेको र उनको अहिले ‘प्र’ह’री नि’य’न्त्रण’मै उपचा’र भइरहेको कपनकी प्र’ह’री नि’रीक्षक सुरक्षा केसीले जानकारी दिनुभएको छ ।
Prevवीरगञ्जमा लुकेर बसेका १९ जमाती सहित २६ जना प्रहरी नियन्त्रणमा
Nextनेपालमा ‘दुई जोईको पोई कुना बसी रोई’ तर यीनका १३ श्रीमती : रोचक त यो हो सबै एकैपटक गर्भवती !
पूर्वसभामुख कृ’ष्णबहादुर महराकी पत्नीको नि’धन
त्रिविले अनलाइन कक्षाका निम्ति ११ हजार अध्यापक र साढे चार लाख विद्यार्थीलाई दिने इ–आईडी यसरी लिनुहोस्
होटेल जान्छु भनेर हिडेको श्रीमान ६ महिनादेखि हराए । श्रीमती रुदै आईन् ! (भिडियो हेर्नुहोस)